MAKA POSKY Embraer ERJ 135 FSX - Rikoooo
downloads 45 642
Ihe nlere site na Project Open Sky (POSKY). Ihe atụ VC nke Jacob Kubique na Corey Ford. FSX converison n’asụsụ nke Speedbird77. Byda nke Christoffer Petersen
Nke a bụ ezigbo ọmarịcha nlele nke zuru oke nke Embraer ERJ-135 nke ndị otu POS emeburu. Nke a add-on bụzi nwa afọ FSX yana ejikwa ya Prepar3D v4 na v5. Ekele diri Speedbird77 maka ntụgharị a. Ejikọtara ya na ọmarịcha kokpiiti dị egwu, 2D Panel, FMC, GPWS, V-Speeds Callout, Ọrụ Ground na 13 repaints.
Ndepụta nke nkwụghachi: City Airline (Purple) - Air France Mpaghara - Delta Njikọ Chautauqua - South African Airlink - Eastern Airways - Luxair - HOP! Maka Ikuku France - Njikọ Midwest - Loganair - Onye isi ụgbọelu nke Belgium - Nkwekọrịta nke South - South African Airlink - United Express.
Olu ndị ahụ sitere na ezigbo Rolls-Royce AE 3007 engine.
Aircraftgbọ elu ụgbọ njem mpaghara mpaghara Embraer ERJ 135 bụ ụgbọ elu ejima-jet nke ụlọ ọrụ Brazil Embraer mepụtara. Ọ batara ọrụ na August 1999. Ọ bụ ụdị mkpụmkpụ nke Embraer ERJ-145.
Onye edemede: bylọ ọrụ Open Sky (POSKY). Ihe atụ VC nke Jacob Kubique na Corey Ford. FSX converison n’asụsụ nke Speedbird77. Byda nke Christoffer Petersen